I-NMR, Isilingo se-Optics, iModulus Encane - Yezabasebenzi
Isilinganiso se-LPT-6 se-Photoelectric Characterist ...
I-LADP-10 Iinsetjenziswa ze-Franck-Hertz Experiment ...
Isibonisi se-FTIR-990AD FTIR
Izinsimbi zeTianjin Labor Scientific Co, Ltd. Itholakala eTianjin Innovation Industrial Park, eBeijing Branch of Chinese Academy of Sciences kuzwelonke ezimele indawo yokubonisa emisha. Ipaki lezamabhizinisi laseTianjin laseBeijing Branch leChinese Academy of Science liyimpumelelo ebalulekile ye-CAS ekuphenduleni ngenkuthalo kuhlelo lonke lwamasu "lwentuthuko edidiyelwe yaseBeijing, iTianjin kanye neHebei" ebekwe phambili yiCPC Central Committee ..
U-Hao ping, owayenguNgqongqoshe wezeMfundo eChina, kanye nabanye ongqongqoshe bezemfundo bezwe basivakashela. sethule ubuchwepheshe bethu bokuklama i-R & D nokumaketha izinsimbi zesayensi kubo, bonke bathatheka kakhulu ngokwethulwa kwethu.
Izindlela zokuphepha zokulondolozwa kwe-infrared s ...
Eminyakeni yamuva nje, imboni yokuvikelwa kwemvelo isebenzise izinqubomgomo eziningi ezithandekayo, okungathiwa ziyathandwa. Izinga lokukhula kwemboni liphindwe kaningana lelo ...
Izinga elisha lokunquma kukawoyela ku-w ...
Akumangalisi-ke ukuthi abantu abaningi bathi imishini yokuvikela imvelo icishe ibe yonke indawo, noma ngabe ukukhiqizwa kwezimboni noma impilo yansuku zonke. Lokhu "ukungena" buthule kuletha ukungena okuningi ...